Muuji qeyb ka mid ah sawirka intiisa kale | Abuurista khadka tooska ah
Laura Carro | | Sawir, Photoshop, Tricks
Waxaa jira waqtiyo aan aragno sawir oo aan ka fikirno siduu noqon doono haddii aan kaliya iftiiminno qayb, ama cunsur.
Casharkaan waxaan ku baran doonaa walax muuji, ama qayb gaar ah, ama adoo siinaya dhalaal dheeraad ah, midab badan, ama saameyn kale oo aan jecel nahay oo aan u maleyno inay ku habboon tahay hel natiijada aan rabno.
Waxaan ku bilaabaynaa xulashada, sawirka gudahiisa, curiyaha ama qaybta aan aadka u jecel nahay.
Waxaan isticmaalnay xulashada geesoolayaasha, maaddaama xaaladdan aynaan sameyn karin xulasho qeexan haddii aan go'aansanno inaan adeegsanno maraqa sixirka. Laakiin sida aad u arki karto, dulqaad iyo faahfaahin yar waad awoodi kartaa.
Maaddaama geesaha xulashadu ay yihiin kuwo fiiqan oo mararka qaarkood taasi u noqon weydo sidii la filayay, waxaan ku bari doonnaa xeelad deg deg ah inaad si fiican u qeex geesahaas. Ahaanshaha aaladda xulashada waxaan ku arki doonnaa baarka kore xulasho la yiraahdo Sifee geesaha, halkaas ayaan ku gujineynaa daaqad pop-up ah ayaa ka muuqan doonta xulashooyinka soo socda:
El raadiyaha ogaadaa gees oo waxyar ka sii qeexaysa.
El soo baxay yareysaa geesaha toosan qaloocsan.
Calar waxaa loola jeedaa cillad xulashada, si aysan u jirin goyn fiiqan oo kale.
El iska samayn doonaa ka soo horjeedka qabyada ah.
Wareegga geeska xulashada yar ama ka weyn.
Ka dib markii aan sameynay isku dhafka ugu fiican ee xulashooyinkaan, waxaan gujineynaa aqbalaan waana arki doonaa natiijada xulashadan. Waxa aan soo jeedineyno hoos ayaa ah nuqul sawirkan loo doortay taxaddar si loo sameeyo wax aanan jeclayn oo ay tahay inaan mar kale doorano. Si loo nuqulo waxaan aadi karnaa tabta Lakabka - Lakabka nuqul, ama waan iska qabannaa Ctrl + J.
Marka tan la dhammeeyo, waxa naga soo hadhay waa sii asalka saameynta aan aad u jecel nahay, oo markaa awood u yeelan karnaa inaan iftiimino cunsurka aan soo-saarnay. Xaaladdan oo kale waxaan ka fikirnaa ka saar dhamaan midabada asalka, ka tagida oo kaliya midhaha la xushay ee midabka leh. Tan waxaan u aadnay Sawir-ku-hagaajin-Quusasho ah:
Waxaad isticmaali kartaa fikradaha kale, sida inaad midabka u bedesho inta kale, kana dhigto iftiin yar, iyo kuwo kale. Sikastaba waxaan badaleynaa qaabeynta sawirka salka, iyo iftiiminaya sheyga wixii aan rabnay.
Ha iloobin inaad ku booqato casharradeenna kale xeelado badan si aad khabiir ugu noqoto tafatirka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Sawir » Muuji sheyga inta ka hartay sawirka
Abuur sawir isku dhafan